Cabdi Tahliil oo Muqdisho lagu aasay
Allah ha naxatiistee waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay fanaankii weynaa Cabdi Tahliil Warsame oo xalay geeriyooday kadib muddo ku dhaw 18 sano oo uu xanuunsanaa.
Aaska Cabdi Tahliil Warsame ayaa waxaa ka qeyb-galay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, maareeyaha golaha murtida iyo madadaalada qaranka, abwaano, fanaaniin iyo ehello.
Cabdi Tahliil Warsame, sida la sheegay wuxuu ku dhashay deegaanka Wardheer sannadkii 1952-kii.
Sannadkii 1968-kii fannaanku wuxuu ku luuqeeyey heestiisii labaad ee Onkod, taasoo aad u caan baxday.
Heestan oo ilaa maanta kaalmaha hore uga jirta dookha dadweynaha waxaa u dhiibay Abwaan Axmed Saleebaan Bide.
Kooxihii kale ee uu Cabdi Tahliil la soo shaqeeyey waxaa ka mid ahaa Kooxdii Danan oo uu kamid noqday hogaankii sare ee kooxdaasi.
Allah ha unaxariistee waxa uu waxbarshada dugsiga sare ku qaatay ku bar baaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan hase ahaatee markii dambe waxa uu usoo wareegay magaalada Muqdisho ee degeenaa ilaa maanta.
Waxaa uu ka tagay caruurta iyo waxa ay sii dhaleen 42 qof.
Sidoo kale fanaan kaliya ma aheen ee waxaa soo noqday xisaabiyaha ee gobolka Bari, waxaa uuna kasoo shaqeeyaan deegaanada Qandalo, Qardho iyo magaalada Ganacsiga ee Boosaaso.
Allaha ha unaxariistee guud ahaan fanaaniinta Soomaaliyeed meel walbo oo ay dalka ka joogaan ayaa ka tacsiyadeeyay geersida ku timid, waxaana ay alle uga baryeen inuu janadiisa fardowso ka waraabiyo samir iyo iimaane uu ka siiyo dhammaan qoyskii, qaraabadii iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay.
Warkan waxaa Muqdisho kasoo diray Cabdulqaadir OK